आज सूर्यग्रहण: कुन राशिले हेर्न मिल्ने कुन राशिले नमिल्ने ? - Deshko News Deshko News आज सूर्यग्रहण: कुन राशिले हेर्न मिल्ने कुन राशिले नमिल्ने ? - Deshko News
आज सूर्यग्रहण: कुन राशिले हेर्न मिल्ने कुन राशिले नमिल्ने ?
आषाढ कृष्ण औँसीका दिन आइतबार खण्डग्रास (आधा सूर्य ढाक्ने) सूर्यग्रहण लाग्दैछ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अनुसार ग्रहणले बिहान १०ः५० बजे स्पर्श गर्नेछ।